Igumbi elinokubukwa kolwandle eSaulkrasti - I-Airbnb
Igumbi elinokubukwa kolwandle eSaulkrasti
Saulkrasti, Saulkrasti municipality, i-Latvia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Una
Jabulela ukubuka nomsindo wolwandle endaweni yethu.
Sinikeza yonke ifulethi elisezingeni lesibili elinendawo yokungena endlini, enamagumbi amabili okubuka ngqo olwandle. Banayo (umbhede owodwa ophindwe kabili, imibhede eyodwa eyodwa, umbhede wengane). Eduze kwekamelo kunendlu yokugezela encane eneshawa, iWC nekhishi (elinohhavini, ifriji, imicrowave).
Izinsiza zifaka: amathawula, ilineni lombhede, igumbi lokulala elinefenisha.
Indawo yethu iku-4 km ukusuka enkabeni ye-Saulkrasti, endaweni ethule, ehlonishwayo ngasolwandle ngaphandle kwabantu abanomsindo. Isitolo sokudla, indawo yokudlela eseduze iqhele ngamakhilomitha angu-2 ukusuka endaweni yethu.
Ngaphambili kwekhaya Ungahlala etafuleni elikhulu lamapulangwe, ujabulele ukudla kanye nokushona kwelanga okungalibaleki.
Engadini Ungenza izoso futhi uphumule esihlalweni sokhuni esinyakazayo.
Sinikeza amathoyizi ahlukene ukuze izingane ziwadlale ngaphakathi nangaphandle kwendlu, ibhayisikili, ihokhi yetafula, ibhola lezinyawo, izinkundla zokucobelelana ngolwazi zokwenza ezakho imisebenzi yobuciko emincane yamatshe olwandle - mahhala.
ibhulakufesi 6 Eur/iphuzu ngalinye.
isidlo sasemini/isidlo sakusihlwa (ukudla kwendabuko) - 15 Eur/ per per.
Ikhaya lethu lingamamitha ayi-100 kuphela ukusuka olwandle, elinendawo yokungena ehlukene nolwandle.
Ungajabulela leli gumbi lepharadesi: umoya ocwebile, ibhishi elihlanzekile elinesihlabathi esihle, esilula nolwandle.
Uma Ungumndeni onabantwana abancane, thanda ukuthula futhi ugqugquzeleke emvelweni, lena indawo engcono kakhulu Kuwe.
Lena indawo enhle kakhulu yokuhamba ngezinyawo eNordic kanye nokwenza ngcono impilo - enephunga eliyingqayizivele lolwandle nephunga likaphayini.
Ungakwazi ukujabulela ipaki yethu ye-Seaside Nature enehlathi likaphayini, izindlela ezinhle zemvelo, indlela enkulu yeLanga, i-White Dune yethu edumile (300 m ukusuka kithi) enokubukwa okudumile kwendawo kanye nendawo yomshado, futhi.
Ngesikhathi sasehlobo Ungaya emikhosini ehlukene nokuzijabulisa eSaulkrasti.
Siyakwamukela endaweni yethu, e-Inčupe!